Matambudziko neBlue yako Mac kubatanidza? | Ndinobva mac
Kumwe kwekubatana uko mumakore achangopfuura kwakachinja zvese muhunhu uye musimba raanoshandisa kuita iri MAKARALI USB. Parizvino pane zvigadzirwa zvisingaverengeke zvinobatana kune imwe neimwe zvichishandisa iyo Bluetooth protocol uye ndosaka paine nguva apo kushanda kweiyi protocol kungatadze.
Muchikamu chino, zvatichazokutsanangurira maitiro ekutanga zvekare Bluetooth system yeMac yako uye ini ndatoona zviitiko zvinoverengeka umo iyo Mac system yakanga isiri kuona chimwe chinhu uye ini ndakanga ndisina imwe sarudzo kunze kwekugadzira reboot yeBluetooth system.
Kugona kumisikidza iyo Bluetooth system yeMac haufanire kudzima zvese zvishandiso zvawakabatana wobva watanga kubva pakutanga uye ndeyekuti Apple yakapa mubatanidzwa wemakiyi kuburikidza nawo iwe uchakwanisa kuita kutangazve nekukurumidza uye nyore. Kuti ukwanise kutanga zvekare izvo zvatinokuudza pano iwe unofanira kutanga waenda kwairi Sarudzo dzeSystem> Bluetooth uye sarudza muchikamu chezasi chehwindo kuratidza chiratidzo cheBluetooth network mubha yepamusoro ye Finder.
Ramba uchifunga kuti iyo Mac's Bluetooth system inozotangwazve uye kana usiri pamberi pelaptop iyo iine iyo keyboard uye trackpad yakabatana panyama, tinokuraira iwe kuti uve newired keyboard uye mbeva. sezvo zvese iyo YeMicrosoft Khibhodi uye iyo Mouse Mouse inomira kushanda sezvo ivo vachivimba zvakananga pane iyi mhando yekubatana
Kuti uwane iyo menyu Debug uchafanirwa kudzvanya pane iyo keyboard iyo alt + ⇧ kiyi yemubatanidzwa paunenge uchitsvaga paBluetooth icon pane yepamusoro bar ye Finder. Uchaona kuti kudonha kunowedzera saizi uye iwe unenge watove nekukwanisa iyo Chinhu chekugadzirisa. Menyu iyo yaunoona mukudonha-pasi ine mikana mina:
Dzorerazve Bluetooth module (resets kune fekitori zvigadziriso).
Dzosera fekitori marongero eese akabatana Apple zvishandiso.
Activate Makaralı kunyoresa.
Delete zvese zvishandiso.
Kuti ubudirire kutangazve bluetooth system yeMac, iwe unofanirwa kutanga waita chinhu chechipiri, ipapo 2 uye pakupedzisira 4. Nenzira iyi, iyo Bluetooth yekubatanidza sisitimu yeMac yako ichadzoka senge pawakaivhura kekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Matambudziko neBlue yako Mac kubatanidza?
Uye kana mune zvido zvesystem hazvindipe iyo sarudzo yeBluetooth?
Pedro, ndatenda nerubatsiro rwese. Dambudziko kwandiri nderekuti ndakakwidziridza MacBook pro yangu kuenda kuHigh Sierra, asi pese pandinovhura muchina, ndinowana meseji ichiti iyo keyboard yeBluetooth haina kuzivikanwa uye ine chiratidzo muchimiro chedenderedzwa pazasi kurudyi , kutendeuka nekutenderera ndisingakwanise kugadzirisa, kudzamara ini ndobatanidza usb tambo kana chimwe chinhu chine usb yekubatana uye yatove kuziva mbeva nekhibhodi uye meseji inonyangarika. Kana iwe ukakwanisa kunditungamira, ndinokutendai zvikuru.
Joel hernandez akadaro
Ini ndinofunga ichi chinetso che software nekuti mac yangu yakangoerekana yamira kushanda keyboard, trackpad neBluetooth, yaive kubva pandakagadziridza kuSierra
Pindura Joel Hernandez
Mhoro! Ndatenda nerubatsiro rwako! Ndine dambudziko rakafanana naEnrique. Chero chinhu chandingaite?
Ndakaita nhanho dzese uye yangu mac bhuku ichiri yakafanana .. haigone kuwana michina yebluetooth 🙁
thankssss, makore ndichifunga kuti haina kushanda ... ndatenda
zvakanaka, mushure mekuita nhanho dzakataurwa dzinoshanda zvakakwana. Kutenda kwazvo!!!!!!!
Mhoro, yangu yanga yakanyanya! Ndakatenga imac nyowani masvondo mashoma apfuura, ndakaivandudza uye pane mazuva ayo bhuruu rinoshanda nemazvo, asi mamwe mazuva rinomira kushanda uye ndine basa rakaoma rekubatanidza keyboard uye usb mbeva kuti ndikwanise tangazve bluetooth, kune Dzimwe nguva iwo matanho aunotsanangura haakwanise kuitwa sezvo pasina submenu inogona kuwanikwa pamwe nekubatanidzwa kwemakiyi pane bluetooth icon, saka handina imwe sarudzo kunze kwekuvhara zvirongwa zvese zvakavhurika uye kutangazve komputa ... zvakadaro. .. kuti uone kana Apple ichigona kugadzirisa kamwe pamwe neyekuvandudza.
Ndinokutendai zvikuru, rubatsiro rwakakura !!! 😀
Sarudzo yekugadzirisa haina kuoneka kwandiri,
Yangu keyboard haina kiyi ye alt. . Ndeupi anoitsiva?
Juan Carlos T akadaro
Pindura kuna juan carlos T
Mhoroi, kwayedza, ndine dambudziko, murabhoritari ndine 22 iMac, uko makomputa ese ane ma waya asina waya nembeva, asi mamwe akabviswa, akabatana nemamwe makomputa, uye inova nyonganiso yevadzidzi, ini ndatoita zvakasiyana zvinhu, chenesa muverengi, bvisa zvese zvishandiso, chinja mabhatiri, uye uenderere mberi nedambudziko rakafanana, ungandiudza zvandingaite here?
Edgar A. akadaro
Pindura Edgar A.
Unofanira patsanura zvose namano. Wobva wanyora mazita kuti vamwe vashandisi vazive mbeva inoenda nekombuta ipi. Chekupedzisira, dzosera Imac yega yega nematanho avo akanyorwa. Paunogadzirisa iwe unofanirwa kuisa zita kune yega yega kiyi mukomputa. Ipa zita iro nhamba yakasarudzwa. Nekudaro, pese pese panotenderera (mbeva kana kiibhodhi) inogadziriswa, kana kudzima, kana kurasikirwa nehukama, mushandisi wega wega, nekuibatanidza zvakare, anozokwanisa kuziva huwandu hwezvipenga zvekubatanidza, uye nyonganiso yauinayo izvozvi ichave kunzvengwa.
Pindura kuna Paul L.
Zvakanaka chaizvo! zvakandishandira kekutanga
Izvo zvinoitika kwandiri ndezvekuti iyo keyboard uye mbeva dzinodonhedza pavanonzwa nezvazvo uye mushure mekanguva vanozobatana zvakare. Ndakaedza kuita zvaunotaura asi zvichingoitika zvakafanana.
Stephen Cabrera akadaro
Mhinduro haina kundishandira, asi ini ndakawana imwe inoshanda. Dzinga uye batanidza iyo Wifi. Wobva wadzvanya pane mause kana isina waya keyboard uye inozobatana ipapo ipapo. Kwaziso.
Pindura Esteban Cabrera
Jose Francisco Garcia Garcia akadaro
MaMac angu kana achinge aona mudziyo kuti ubatanidze asi kwemasekonzi chete inoramba yakabatana uye inodzima….
Pindura kuna jose francisco garcia garcia
Adriana lopez akadaro
Ndinokutendai zvikuru, ini ndakatevera maitiro uye ini ndinogona ikozvino kubatanidza neBluetooth uye teerera nekuti sezviri pachena yaive yakabatana asi ruzha rwaive paMac.
Pindura Adriana lópez
Mhoro. kwaziso kubva kuChile. Ndine MacBook Pro, ndakamutengera mac inoenderana isina waya keyboard. inoshanda zvakanaka uye inobatana neiyo buethoh kana iine iyo inoshandura, pandinobvisa iyo transformer uye iyo mac inoshanda chete pabhatiri, iyo keyboard inodimbura uye isingazombobatanidzazve…. asi ini ndinoivhara mujaja iyo inobatana zvakare uye inoshanda mushe ... nebhatiri kubatana kwacho kunotora kanokwana gumi min ... .. Nei izvi zvichiitika =? zviri zvekutadza, inyaya yekuchengetedza simba kana chii? ...
Ini ndakazozvigadzirisa! Kutenda kwazvo! Zvaishungurudza kusakwanisa kunzwa chero chinhu zvakare
Fernando Ramos Orihuela akadaro
Ndatenda. Ini ndinogona pakupedzisira kubatanidza iyo Microsoft mbeva kune yangu macbook Pro. Inonyanya kubatsira info. Makorokoto !!!
Pindura Fernando Ramos Orihuela
MacBook Pro inopisa, asi zvese zvinoratidza kuti iri yega kesi